पुस १४ गतेदेखि २० गतेसम्म लाग्ने धारागोला महोत्सवको तयारी तीव्र::Hamrodamak.com
शान्तिनगर। बुद्धशान्ति गाउँपालिका–७ धारागोलामा सात दिवसीय धारागोला भ्यूटावर जरेवर तथा बुद्धशान्ति महोत्सवको तयारी तीव्र पारिएको छ । यही पुस १४ गतेदेखि २० गतेसम्म लाग्ने महोत्सवको तयारी तीव्र पारिएको महोत्सव आयोजक समितिका अध्यक्ष चक्र सेर्माले जानकारी दिए । २०७१ सालदेखि लाग्दै आएको महोत्सवले यसवर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ ।
पाँचौ पटक लाग्ने महोत्सव धारागोला खेलमैदानमा लाग्नेछ । जिल्लाको प्रमुख पर्यटकीय स्थल धारागोलामा भ्यूटावर निर्माणको क्रममा छ । सोही भ्युटावर निर्माण र प्रचार÷प्रसारका साथै आदिवासी जनजातिको संस्कृति उजागर गर्न हरेक बर्ष महोत्सवको आयोजना हँुदै आएको सेर्माले बताए ।
महोत्सवमा यसवर्ष विभिन्न जातजातिको झाँकी प्रदर्शन गरिने छ । यसका साथै बुद्धशान्ति गाउँपालिकास्तरीय नृत्य र गायन प्रतियोगिता हुने आयोजक समितिका सदस्य सुमन लेप्चा(वाङ्चू)ले जानकारी दिए । महोत्सवमा विभिन्न कृषि समूहले उत्पादन गरेको कृषि उपज वस्तुहरुको प्रदर्शनी, लोपोन्मुख नेपाली मौलिक खेलकुदका कार्यक्रम, पूर्वाञ्चलब्यापी साहित्यिक कार्यक्रम, रक्तदान कार्यक्रम र हरेक साँझ स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरुको सांगीतिक प्रस्तुति रहने आयोजकले जनाएको छ । यसका साथै महोत्सवमा एक सयभन्दा बढी स्टलहरु रहने बताइएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७१/०७२ मा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार बिशेष कार्यक्रममार्फत रु.१२ लाख र आर्थिक बर्ष २०७२/०७३ मा रु.१८ लाख साथै स्थानीयको जनसहभागिता मार्फत रु. एक लाख ७१ हजार पाँच सय ५२ रुपयाँ ७३ पैसाको लागतमा पाँच तले भ्यू–टावरको ७० प्रतिशत संरचना निर्माण भएको छ ।
बाँकी काम सम्पन्न गर्न आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट रु. १० लाख विनियोजन भएपछि भ्यू–टावर सम्पन्न हुने क्रममा छ । निर्माणधीन संरचना सम्पन्न गर्न बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । उक्त भ्युटावर निर्माण सम्पन्न गर्न करिब एक करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सो रकम जुटाउन सम्बन्धित निकायको ध्यान केन्द्रित गर्न महोत्सव लाभदायी हुने भ्यूटावर निर्माण समितिका सचिव राजकुमार लावतीले बताए ।